ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ မီးရှို့| Freedom News Group
ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ မီးရှို့ 
by FNG on October 1, 2012	ဘင်္ဂလား ဒေရှ် အစိုးရ က ဖွဲ့စည်း ထား သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ ကနဦး အစီရင် ခံစာ အရ သိရှိရသည် မှာ ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နိုင်ငံ ၊ ကောဇ့် ဘဇား ခရိုင် ၊ ပန်းဝါ မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့စေတီ ရုပ် ပွားတော် တွေ ကို မီး ရှို့ ဖျက် ဆီးသူများ ဟာ မြန်မာ နိုင်
ငံ ကနေ ပြီးခဲ့ တဲ့ လ အတွင်း က ထွက် ပြေး လာ ခဲ့ တဲ့ ဘင်္ဂါ လီ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် တွေ လို့ 
အဲဒီဒေသ မှာ ရှေးမဆွ ထဲ က ရှိ ခဲ့ တဲ့ မွတ်ဆလင် တွေ လည်း ဆူပူမှု မှာ ပါဝင် ခဲ့ ပြီး ဖမ်းဆီး ရမိ
ခဲ့ သူတွေထဲ မှာ အများ စု ကတော မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက် ကနေ ဆူပူ သောင်းကျန်းမှု နဲ့ထွက် ပြေး သွားခဲ့ တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဖြစ် ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ရ သတင်း တွေ အရ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် တနင်္လာ နေ့မနက် အထိ ကော့ဘဇား
မှာ အခြေ အနေ တွေ ထပ် ဆိုးလာ ပြီး စစ်တကောင်း အရပ် က ပေါ်တီယာ ဒေသ က ဘုန်းကြီး
ကျောင်း တွေ အပါ အ၀င် ၊ ဒိုင်းနက် လူမျိုး တွေ နေတဲ့ ဒေသ က လူနေ အိမ် ခြေ တွေ ကို လည်း
မီးရှို့ ဖျက် ဆီးခဲ့ တယ် လို့သိရ ပါတယ်။ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ဖို့လာတဲ့ လူတွေ ကို ရဲတပ် ဖွဲ့က အသံ ချဲ စက် နဲ့နောက်ပြန် ဆုတ် ဖို့ သတိပေး
ခဲ့ ပေမယ့် ဂရုမစိုက် တာ ကြောင့် သေနတ် မိုး ပေါ် ထောင် ဖောက် ခဲ့ ရတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
ဆူပူ သောင်း ကျန်း သူ တွေ ကို ဖမ်းဆီးထား ပြီး တချို့ဒေသတွေ မှာ လုံခြုံရေး အင်အား နည်းတာ
ကြောင့် အခြေ အနေ တွေ ဆက် လက် ဆိုး ရွား နိုင်တယ် လို့ဒေသ ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် တွေ က ယူ
ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နိုင်ငံ ၊ ကောဇ့် ဘဇား ခရိုင် ၊ ပန်းဝါ မြို့မှာ ဒေါသ ထွက် နေတဲ့ မွတ်ဆလင် လူ
တိုက် ခိုက် ဖျက် ဆီး တယ် လို့CNN သတင်း မှာ ဖော် ပြ သွား ပါတယ်။
အဲဒီဒေသ က ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ် လေး တစ်ဦးက သူ ရဲ့Facebbok မှာ ကိုရ်ရန် ကျမ်းစာ ကို
မီးရှို့နေတဲ့ ပုံ ကို တင်ထား လို့တိုက်ခိုက်ရတယ် လို့ဆူပူသူ တွေ ထဲ မှာ ပါ တဲ့ သူ တစ်ဦး က
ကော့ဘဇား မြို့က သတင်း စာ တစ်စောင် ကို ပြော ပါတယ်။
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကတည်း က တည်ထား တဲ့ ဘုရား စေတီ ရုပ် ပွား တော် တွေ
ဖြစ်တဲ့ အပြင် မြန်မာ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ ပန်းဝါ မြို့နယ် ရာမားဂူနား ကို စစ်ထွက် စဉ် မှာ
လာရောက် ဖူး မြော် ကြည်ညို ခဲ့ တဲ့ သမိုင်းဝင်း ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွား တော်တွေ ဖြစ်တယ် လို့ကောဇ့် ဘဇား
မှာ နေ တဲ့ ရခိုင် လူမျိုး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးဦးထွန်း က ပြော ပါတယ်။
ဒေါသ ထွက် နေတဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာ ၀င်တွေ ဟာ စနေ နေ့ညနေ က တည်း က ရာမူးမှာ
ဆူပူ ဖို့စတင်လူစု ခဲ့ တာ ဖြစ်တယ် လို့ကောဇ့်ဘဇား ရဲတပ် တပ်ဖွဲ့က ဒုရဲ အုပ် Saleem Jahangir က
CNN သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ်။ အခုတော့ အခြေအနေ တွေ အားလုံး ထိမ်းသိမ်း ထား လိုက် နိုင် ပြီ လို့ရဲတပ် ဖွဲ့က ပြောပေမယ့်
အဲဒီ ဒေသ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် တွေ က တော့ မွတ်ဆလင် ဘာသာ ၀င်တွေ ထပ် ပြီး ရန် ပြု နိုင် တယ်
လို့ဆို ပါတယ်။
ညသန်းခေါင်ယံ မတိုင်ခင် မှာ ဒေါသ ထွက် နေတဲ့ လူ အုပ်ကြီး က ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေ ၊ ဘုရား
ပုထိုး တွေ ကို မီးရှို့ ခဲ့ ပြီး ရုပ် ပွား တော် တွေ ကို လဲ ခေါင်းဖြတ် နေကြတာ ကမ္ဘာ ပျက် မတတ် ပါ
ပဲ လို့ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလား ဒေရှ် ပြည်ထဲ ရေး ၀န်ကြီး Mohiuddin Khan Alamgir က ဆူပူသောင်းကျန်း မှု ကြောင့်
ပျက် စီ ခဲ့ တဲ့ နေရာ တွေ ကို လာရောက် ကြည့် ရှု ခဲ့ ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေရှ် အစိုးရ က ချက် ခြင်း ပဲ ဒီကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် လို့စုံစမ်း စစ်ဆေး ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း
ခဲ့ ပြီး ဆယ် ရက် အတွင်း အစီ ရင်ခံ ဖို့ညွှန်ကြား ထား ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် လူငယ် လေး ကတော့ Facebook မှာ ဒီဓာတ်ပုံ ကို တင်တာ သူ မဟုတ် ပဲ တစ်ယောက်
ယောက် Tag လုပ်သွားတာ ဖြစ် ပြီး အခု တော့ သူ့ရဲ့Facebook လိပ်စာ ပါ မရှိ တော့ ဘူး လို့ဆိုပါ
တယ်။ Related articles
Muslim protesters torch Buddhist temples, homes in Bangladesh (dailystar.com.lb)
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၁.၁၀.၁၂) မှ ( ၇.၁၀.၁၂) ထိ၊ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
A Conversation with President U Thein Sein of Myanmar →
ဗုဟွှဘာသာဝင်သူငယ်ချင်းတို့ သူတို့ လုပ်တာ နာမနေ နဲ့ 
ဘုရားခေါငးပြတ်ရင်ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ မင်းတို့ ငါတို့ ရဲ့ ရင်ထဲမှာဘုရားရှိတယ်လေ
October 13, 2012	pakokkukaunglay	#
October 7, 2012	zarni	#
သိပြီးသားဘာ. သူတို့ ဘာသာအကြောင်းyoutubeက ပြောင်ထားတော့ ..ပြောချင်ဘူးနိုင်ငံပေါင်းစုံ ကမွတ်တွေဒေါသပုန်ထအကြမ်းဖက်လို့ .. ငါ့တို့ ဘုရားကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်မင်းတို့ လုပ်တော့
ငါတို့ တွေက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန်ဒပြတားပြစ်တာဘဲလုပ်တယ်.. I wish the world is watching this foolish act by them and judge accordingly.
October 4, 2012	jack	#
ဒီခဏတော့သူတို့နိုင်တယ်လိုထင်ခြင်ထင်မှာပေါ့ကွာ ဒီလိုပဲ ဥာဉ်ရည်နိမ့်ပါးသူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ရမဲ့အစား…သူများကိုဖြိုဖျက်နိုင်မှ နေရာရမယ်လို့ထင်တတ်တယ်လေ…
October 2, 2012	်အန်ကယ်ဆန်	#
October 1, 2012	mg phone	#
ဘုရားပုံတော်လဲမရှိတဲ့ ကောင်တွေကငါတို့ ဘုရားပုံတော်တွေကျလုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြတယ်။သူတို့ စာအာပ်လေးကျဖြစ်နေကြတယ်။မင်းတို့ တနေ့ ဝတ်လိုက်တာဘာလဲဆိုတာပြမယ်။
October 1, 2012	nannaythu	#
ဟုတ်ပြီး..တာဆိုမနေ့ ကလဲ ကျွန်မတင်တာမကြာခင်မှာဘဲ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောက်ကိုဖွင့်မရတဲ့အကြား လုံးဝပြန်ရှာလို့ မရတော့ဘူး… ခုတော့ အကောက်သစိနောက်တခုနဲ့ ပြန်ဖွင့်ရတာပေါ့
October 1, 2012	uzawmin.thamine	#
ရုပ်ပွားတော်ဆင်းတုတွေ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ ကိုမင်းတို့ဘယ်လောက်ဘဲဖျက်ဆီး ဖျက်ဆီး တစ်ကယ်ပျက်ဆီးဒုက္ခရောက်မှာကမင်းတို့ရဲ့မွတ် ဆ လင်ဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိလာ
မှာပါ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုကြည့်မလဲ ခွေးသေ ဝက်သေ သေပြီးအချင်းချင်းသတ် နိင်ငံအချင်းချင်းတိုက်နေတာမင်းတို့ရဲ့မွတ်ဆလင်နိင်ငံတွေဘဲဆိုတာအားလုံးအသိကမ္ဘာအသိဘဲမိစ္ဆာတွေရဲ့
October 1, 2012	Trackbacks & Pingbacks
ပန်းဝါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း နဲ့ရုပ်ပွား တော် တွေ ကို မွတ်ဆလင် တွေ ဖျက်ဆီးမှု ကိုေ	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,529,279 hits